“Waxaanu Is Lahayn Muuse Biixi 27-Kii Sano Ayuu Wax Ka Baran Doonaa Balse Wuxuu Dib U Raacay Halkii Lagu Jabay…Faysal Cali Waraabe |
“Waxaanu Is Lahayn Muuse Biixi 27-Kii Sano Ayuu Wax Ka Baran Doonaa Balse Wuxuu Dib U Raacay Halkii Lagu Jabay…Faysal Cali Waraabe
Hargaysa(HWN)Guddoomiyaha Xisbiga Mucaaridka ah ee UCID Eng. Faysal Cali Xuseen (Faysal Cali Waraabe) ayaa waxa uu si adag u naqdiyey fadhilka ku yimid wada hadalkii u socday saddexda xisbi qaran ee ku aaddanaa wada tashiga isaga oo burburka wada xaajoodkaasi sababtiisa dusha u saaray xisbul xaakimka KULMIYE isaga oo si gaar ah u dhaliilay Madaxweynaha Somaliland Md. Muuse Biixi Cabdi oo uu ku sifeeyey nin aanay waxba uga kordhin waxna ka korodhsan mudaddii 27-ka sano ahayd ee dalkani soo maray sida uu hadalka u dhigay isaga oo Guddoomiye Faysal dhinaca kale ku hanjabay haddii ay doorashadu wakhtigeeda ku dhici waydo in ay
abaabuli doonaan shir-beeleed ay umadda isugu yeedhaan.
Guddoomiyaha xisbiga UCID oo hadal ka jeediyey xaflad mid ka mid ah dadka hanka leh ee u taagan doorashooyinka Golaha wakiiladu ku shaaciyey Musharraxnimadiisa oo uu isaga soo sharraxayo xisbiga UCID ayaa waxa uu Guddoomiyaha xisbiga UCID Mudane Faysal Cali Waraabe sheegay in dalkeenu maanta halkii ugu liidatay marayo Golaha Wakiilada iyo Deegaamaduna doonayaan in ay iska soo fadhiyaan iyada oo aanay doorasho dalkan ka dhicin halka uu soo qaatay hadallo dhex maray xubin xisbiga KULMIYE ah oo uu magaciisa qariyey iyo isaga.
Guddoomiyaha Xisbiga Mucaaridka ah ee UCID Eng. Faysal Cali Xuseen oo arrimahaasi ka hadlayaa waxa uu yidhi: “Maanta Doorasho masoo muuqato oo ma dhacayso. Innaga uunbaa dadaalayna oo si wanaagsan u soconee, wax soo muuqda oo doorasho ahi ma jirto. Dadaal Madaxtooyada iyo baarlamanka toona ka socdaa ma jirto. Golaha wakiilada ee maanta jooga shan sano ayaa la doortay. Adduunka ma jirto meel la iska fadhiyaa. Waxa loo sameeyaa muddo xilliyeed (Term) oo waxa la yidhaa Madaxweynaha muddodiisu waa shan, Baarlamanka waa afar ama waa shan kadib waa in wakhtigiisu ka dhammaadaa oo doorasho sidaa lagu galaa. Maanta innaga Golaha wakiiladu 13 sano ayay joogaan. Saddexdii teeram ee Min shanta ahaa waxa u hadhay oo kali ah laba sano.
Waa ayaan darro weyn. Sheeko doorasho iyo waxaa waa la iska daayay oo waa la iska dhaafay. Dhawaan markii aannu xajka ka soo laabanay ayaan bilaabay in aan dadkii isugu yeedho. Xisbigii WADDANI baanu u tagnay. Odayaal baan u diray Madaxweynaha. Waxaan ku idhi waar bal ballan Madaxweynaha ka soo qabta. Waxaad ka soo qabataan ayaan ku idhi ballan 3-da xisbi ah. Way ka soo qabteen Ilaahay Ajar iyo xasanaad haka siiyee. Xisbiga WADDANI ayaanu u tagnay oo waxa aanu ku nidhi waar sidani si maahee dee miyaynu iska laalaabnaa axsaabtii. Waxaan ku idhi waar idinkuna ka baxa waxaa aad leedihiin hala kala diro ee Koomishanka ku saabsan. Nimankaasi Komishanka wakhtigoodu waxa uu dhammaanayaa 2019 ee aan laba xubnood ku kordhino oo doorashada sidaa haku qabtaan. Tii bay ogolaadeen kadib saddexdayada xisbi waanu shirnay. Arrintaa annaga iyo xisbiga KULMIYE ayaa markii hore kasoo hor jeednay mawqifkiinaasi ayaanu WADDANI ku nidhi. Kadib annaga iyo KULMIYE ayaa saddex jeer shir isugu nimid. Nimankii KULMIYE halkii way ka soo dhaqaaqi waayeen. Dhexdhexaadintii aannu keenay way diideen. Tii WADDANI keenayna way diideen. Dorraad ayaa hadalkii markaa naga xidhmay”.
Guddoomiyaha Xisbiga Mucaaridka ah ee UCID Eng. Faysal Cali Xuseen waxa uu walaac weyn ka muujiyey xaaladda dalka iyo nidaamka xisbiga KULMIYE dalka ku wado waxaanu yidhi: “Dalkani laba arrimood buu ku socday oo aannu adduunka ka iibin jirnay. Waxa ay ahaayeen Nabad-gelyo iyo hannaanka dimuquraadiyadeed ee doorashooyinka axsaabta badani ku loolamaan.
Labadiiba maanta khatar ayay ku jiraan. Waataasoo qabiilbaa loo baxay. Waydinkaa arkayoo jabhado ayaa la samaystay. Waa wax aan hore innoo soo marin weeyi. Dimuquraadiyaddiina waataasi aad aragtaanoo biriigga ayaa loo qabtay oo loogu joogsaday. Haddii uu Muuse Biixi qaatay ra’yigii Riyaale aan berigii ka daynay ee la yidhi adaa u badan Baarlamankee hakuu fadhiyo. Waxaan idiin sheegayaa in aanu fadhiyayn maanta. Anaa runta idiin sheegaya. Baarlamanku ma fadhiyayo, Muusena ma fadhiyayo, dawladaha hoosena ma fadhiyayaan oo shir-beeleed baanu ku dhawaaqaynaa.
Mar haddii axsaabtii la baabi’iyey oo doorasho sidaa ku dhici waydo, waxaanu ku dhawaaqi doonaa shir-beeleed. Dalkuna wuu baaba’ayaa xaqiiqo ahaan wuu baaba’ayaa.
Dalkani maanta maalin uu ka xun yahay ma jirto. Waxaannu is lahayn Muuse Biixi 27-kii sano ee dalkani soo socday ayuu koray, khaladaadkii hore u dhacay ayuu ka faa’iidaysan doonaa, casharro ayuu ka baran doonaa.
Waddooyinkii hore loogu jabay buu ka leexan doonaa. Hadduu laakiin tii dib u raacay oo qabtay annagu dul qaadan mayno. Nin weyn oo guddidiisa ka mid ahaa ayaannu ku nidhi waat haddii aydaan 9-ka xubnood ee Komishanka ogolaan nimankan WADDANI waxa ay yidhaahdeen annagu guddidan Komishanka ogolaan mayno oo doorasho ay qabanayaan ku gali mayno. Ee markaa doorasho dhici maysee maxaad leedihiin? Ayaan waydiiyay waxa uu yidhi: “Maxaa ka macno leh” shanta sano wuu iska fadhiyi doonaayoo kolba lacagta soo baxda ayuu meeshii rabshadi ka dhacdo ku bakhtiin doonaa”. Haddaba waxaannu u sheegaynaa oo aannu leenahay ma fadhiyayo. Fadhiyi maanu ayaanu leenahay”.